Ballet Class - Lesona Ballet Beginner
Vonona ho an'ny kilasy Ballet
Rehefa avy nanapa-kevitra ianao fa te- hianatra ballet , dia mila miomana amin'ny lesona voalohany ianao. Na dia mety hangataka ny mpampianatra baolina vaovao aza ianao momba ny akanjo baskety mety, dia azo inoana fa tena mila manao akanjo lava maromaro ianao, ary misy loko sy paosin-tavoahangy vita amin'ny hoditra na baskety . Ny volonao dia tokony hapetraka tsara eo amin'ny lohanao amin'ny baoritra balerina . Tsy tokony hanao firavaka ianao. Tokony hitondra kitapo bala feno tsikombakomba vitsivitsy, toy ny rano anaty tavoahangy sy ny fitaovana ampiasain'ny tarika.
Ny kilasin'ny baolina dia natao any amin'ny sekoly sy fianarana manerana izao tontolo izao. Na dia samy hafa aza ny sekoly sy ny studio, dia misy zavatra roa azonao andrasana hijerena: sola eny amin'ny gorodona sy baolina. Ny ankamaroan'ny fianarana biletà dia manana fitaratra lehibe eny amin'ny rindrina, ary ny sasany misy ny piano. Ataovy azo antoka fa asehonao aloha kokoa noho ny fotoam-pandaharanao ny fotoana ahafahanao miomana ho an'ny kilasy. Rehefa miantso anao ho any amin'ny trano fianarana ny mpandihy ballet, midira mangina ao amin'ny efitrano ary mahita toerana hiorina. Ankehitriny dia vonona ny hanombohana ny lesona voalohany nosoratanao.
Mitrakà ary miarena
Ny ankamaroan'ny mpandihy dia te-hiditra ao amin'ny kilasin'ny baolina lavalava kely vao maraina, noho izany dia nanam-potoana vitsivitsy izy ireo mba hampitony ny tenany manokana. Ny mpampianatra baolina sasantsasany mandrisika ny hazavana hikoriana alohan'ny kilasy, fa manomboka ny kilasy eo am-baravarana.
Rehefa tonga any amin'ny studio ianao dia asio ny kiraronao amin'ny baolina kitra ary tadiavo ny toerana hiverenanao. Miezaha manosotra tsikelikely ny vatana mangatsiakan'ny vatanao, ary tandremo tsara ny tongotrao sy ny andilanao. Andramo kely ny fametrahana ao amin'ny gorodona, ao anatin'izany ny fizotran'ny asehon'ity fitrandrahana tsy mihetsika ity .
Saika ny sasantsasany amin'ny ballet rehetra horaisinao dia hanomboka amin'ny sambo. Ny fanazaran-tena natao tao anatin'io barre io dia natao hanamaivanana ny vatanao, hanamafy ny hozatrao ary hanatsara ny fahasalamanao. Ny asa Barre dia manampy anao hamorona fototra mafy orina hanorenanao ny dingana rehetra sy ny fihetsikao.
Miezaha mifantoka sy mifantoka amin'ny dingana tsirairay ataonao eo amin'ny saka. Mitondrà fijery eo amin'ity fahazoana fototra ity mba hahafantarana ny zavatra andrasana.
Rehefa avy nanao fampihetseham-po ampy mba hampitony ny vatanao ny mpampianatra baolina dia hampianatra anao hivoatra any afovoan'ny efitrano ho an'ny "foiben'ny asa". Ny asa fanorenana matetika dia manomboka amin'ny port de bras, na ny fiadiana ny sandry. Amin'ny port de bra, ianao dia hianatra ny fomba hikorontana ny hetsikao ary handamina ny hetsika amin'ny lohanao sy ny vatanao.
Mandritra ny fampiharana ny toeran'ny balisy, andramo ny fizotran'ny fihetsiketseham-pandehan'ny fihetsiketsehana tsirairay avy manomboka amin'ny iray sosona amin'ny manaraka. Aza mitsambikina ny sandrinao na mandosira eo amin'ny fihetsiketsehana ... miezaha hanohy tsy tapaka.
Ny ampahany manaraka amin'ny asa afovoany dia mety ho ny ampahany adage. Ny mpampianatra baolina kanto dia hitarika anao amin'ny alalan'ny andian-tsosika maromaro mba hanampy anao hianatra hifehy ny fandanjalanjanao ary hivoatra tsara.
Ny ampahany iray amin'ny ampahany miasa ao amin'ny biletà afovoany dia antsoina hoe allegro. Allegro dia teny italianina antsoina hoe "haingana sy velona".
Mandritra ny allegro, ny mpampianatra baolina kitra dia hitarika anao amin'ny alalan'ny andianà fihetsika haingana, anisan'izany ny fitsangatsanganana kely maromaro sy ny teboka, arahin'ny tsipika sy tsipika lehibe (grand allegro.)
Ny ankamaroan'ny mpampianatra baolina dia te-haka fotoana kely mandritra ny kilasy ho an'ny mpianatra amin'ny fanaovana pirouettes . Pirogeta dia miova na andiam-balala vita amin'ny tongotra iray.
Ny kilasin'ny baolina kitra rehetra dia mifarana amim- panajana , rehefa manilika na miankohoka ny mpianatra hanehoana ny fanajany ny mpampianatra sy ny pianista (raha misy.) Ny fanajàna dia matetika ahitana tsipika, tsilokina ary ports de bras. Fomba iray hankalazana sy hikojakojana ny fomban-drazakazakazakan'ny fanaingoana sy ny fanajana.
Ahoana ny fomba hahazoana ny tongotra tsara tarehy
Fiatoana amin'ny Pointe Shoes
Fanamboarana ny biletà 'The Nutcracker'
Fomba handrafetana kiraro pointe vaovao
Sary famintinana ny Peter Pan Ballet
Profile of the Ballet Cinderella
Inona ny Cecchetti Ballet Method?
Soso-kevitra ho an'ny fanadiovana sy fanalana ny tifitra avy amin'ny Pointe Shoes
Ny fomba tsara kokoa hahatakarana ny tenin'i Shakespeare
Ny fanontanian'ny ray aman-dreny momba an'i Montessori
Ady faharoa: Jeneraly Jimmy Doolittle
Top 10 Reference References for Writers and Editors
Nahoana ny Oseana Ranomasin-tsira? Whale Sperm!
Venus Virgo Man - Famantarana fitiavana
Fahagagana fanasitranana avy amin'ny voankazo Soursop (Guanabana)
Elia - Olona sakaizan'ny Mpaminany
Fanehoan-kevitra frantsay miaraka amin'ny Vivre
Ny fotoana farany indrindra amin'ny Fergie
Tsara ve ny manao hosodoko amin'ny Acrylics amin'ny horonantsary tsy mahomby?
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny esperanto Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto
Inona no noresahin'i Mark Twain momba ny fanandevozana?
Nahoana i Dickens no nanoratra "Christmas Carol"
Maty sy Dye
Ny teoria any amin'ny honahona
Ny Tantaran'ny Krismasy
Karatra Krismasy ho an'ny miaramila Amerikana
Ny faha-90 taonan'ny kilasy: Curriculum core
Manao Fiainana ao Manga: Fizarana 3
Nahoana ny 'Gatsby Lehibe' no nampiady hevitra sa voarara?
American Negro Academy: Fampiroboroboana ny talenta
Babylona (Irak) - Renivohitry ny Tontolon'ny Mesopotamia